Best 24 Skull Tattoos Chirongwa Chimiro Kwevarume nevakadzi - Tattoos Art Ideas
Best 24 Skull Tattoos Design Mafungiro Kwevarume nevakadzi
Kushandiswa kweTeek tattoos kunogona kushanda senhamba yezvinangwa zvinomiririra. Zvinoreva zvinogona kuva kufa nekufa. Iwe unofanirwa kuita zvimwe tsvakurudzo usati waita shandisa tattoo yehenya.
Skull tattoo zvinoreva
Skull Tattoos Kufananidzira kunosiyana kubva pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe. Iko kune marudzi akasiyana eedhenya uye vane zvarinoreva zvakare. Pfungwa yokuti dhehenya rinoreva rufu nehuwandu hwevanhu hunogona kunge husina chokwadi kunyanya kana yakakonzerwa necheti rakakura reziso. Dhehenya rinogona kukweverwa nenzira dzakawanda uye dzinopedzisira rine tsananguro yaunoda. Tsananguro yechete inogona kuva chiyeuchidzo cheumwe munhu anofa uyewo kuti isu tose tinofanira kurarama hupenyu huno huzere.
Izvo zvigadzirwa zve skulls zvinewo zvarinoreva semushuga unozivikanwa wega #skull tattoo iyo inowanzonzi kuTexican skull tattoo kana tattoo skull tattoo. Tora muenzaniso veMexico vanoda zuva revakafa tattoo nekuda kwebasa rainoisa.
Vakadzi vanoshandisa zvidzitiro zvebhedha nguva zhinji vanozviita nemifananidzo yakawanda kuti vape zvinorehwa. Kune vanhu vanobatanidza dhehenya rine crossbones kunyanya vashandi, iyo tattoo ine zvakawanda zvinorehwa maererano nemunhu ane mufananidzo.
Vakadzi vanowanzoshandisa mavara pakuchinja nzira iyo vanhu vanoona #tattoo uye zvinorehwawo zvakare maruva.
1. Skullflower skull tattoo design pfungwa yevakomana pamakumbo
Skulls dzinowanzoonekwa sezvinhu zvitsvene kana zvisiri zvepanyika asi kana zvasvika kune zvidhori, zvigunha zvakave zvakasiyana chaizvo nezvatinofunga zvakawanda. Imwe tsanga reki sechimiro chekukosha pane chimwe chinhu.
2. Pamusoro pako cool cool skull tattoo ink pfungwa yevakomana
Iyi ndeimwe yemibvunzo yaunoda kupindura usati wanyora tattoo.
3. Chirwere chekatsva chakanyanya pane ruoko rwakakwana pfungwa kune vakomana
Iwe ndiwe mugadziri wemutambo wako wekutema. Paunenge watora tattoo inopisa mafungiro ako kana wapindura mubvunzo wako mukumirira imwe pfungwa, ibasa rako kuwana mhizha
4. Skull ruoko rwekutora mifananidzo pfungwa yevarume
Paiva nenguva iyo varume vakanga vari ivo voga vakanga vari kuisa tattoos pamitumbi yavo.
5. Skull skull tattoo design pfungwa yevarume
Kwakave mazuva apo vanhu vanotya zvimwe zvinhu zvakadai. Nechitinha kuva chimiro cheumhizha, tiri kuona vanhu vakawanda vachigamuchira tattoo seyizvi.
6. Kubwinya kwekatei tattoo kugadzirwa pavakadzi vadzoka
Nehuwandu hwevanyori vekutsvaga muIndaneti, kutsvaga muimbi wako unogona kuva chiitiko chinotyisa ndicho chikonzero nei tichizokukurudzira kuti uongorore kutanga usati wanyengedzwa.
7. Leaf uye skull tattoo design pfungwa yekuita
Nzira iyo vanhu vanoita zvinhu zvakasiyana-siyana zvakakomberedza tattoo seizvi inoita kuti iwedzere kufadza. Unofungei?
8. Skull tattoo kugadzirisa pfungwa nemaruva emucheka pavarume vakafukidzana
Nhau yacho yakashandurwa nhasi sezvo varume nevakadzi vanogona kushandisa iko kwechivara ichi pasina kunzwa kunze kwenzvimbo.
9. Half sleeve skull tattoo ink pfungwa kuvanhu
Iyi tattoo #design inogona kuoneka yakasiyana pano. Zvisinei, kana iwe usina unyanzvi uyo aizomiririra izvi zvakakwana mumuviri wako, zvinogona kuva dambudziko.
10. Musical rock skull tattoo ink pfungwa yevarume gumbo
Vanhu vazhinji vakapedza nguva yavo nemari vachiedza kuwana tattoo yakakwana chete kuti vapedze nebasa rakaoma rakaitwa.
11. Akabatana nehafu yechangu yehenya bhandi rakagadzirwa pfungwa yevakomana
Nyaya yakaipa nguva dzose inowanzoitika apo vanhu vanowedzera mifananidzo yakaipa yekutora mifananidzo. Chiitiko ichocho chisingafaniri kufungidzira zvachose.
12. Kurutivi rworuboshwe rwemuviri wakagadzirwa nekodha skull tattoo
Zvidhori zvakadai sezvizvi zvinogona kuiswa pane chero chikamu chemuviri. Paunenge uine icho pachikamu ichi chemuviri wako, hachiregi kutarisa zvakanakisisa. Chinhu chokutanga chaunofanira kuita ndechokuti uwane unyanzvi unyanzvi uyo achakubatsira nechishamiso chinogadzirwa
13. Flying shavishavi Skull tattoo design pfungwa yokuti varume vafudzi
Izvo zvinoreva gweta rakagadzirwa zvichava chimwe chinhu chaunoda kunyatsonzwisisa usati washandisa imwe. Iwe unogona kugadzira skull yako yakagadzirwa maererano nenzira yaunoda kuva nayo. image source
14. Biceps skull tattoo ink idea for vakomana
Zvisinei, zvinoreva zvinhu zvakawanda kana iwe usingazivi. Inogona kushandiswa kumirira simba, simba uye kudzivirirwa. Kune avo vanofanirwa kunge vane ruzivo rwekufa kana kufa, vanowanzoishandisa kushandisa kukurira mafibias avo. image source
15. Akavhara kusvika hafu sleeve kugadzira skull tattoo ink pfungwa kune vakomana
Vamwe vanhu vanowanzoishandisa kushandisa kuratidzira hupenyu hwavo hwekare. Inogona kutomiririra munhu akaipa. image source
16. Skull tattoo ink design pfungwa nokuda kworuoko
Dzimwe nguva, zviratidzo zvetsanga zvinoshandiswa kuchenesa vanhu uyewo chiratidzo chekukunda. Izvo zvigadzirwa zvinogona kukweverwa mumhando dzakasiyana uye hukuru. Iwe unogona kuita kuti zvive zvevakadzi kana iwe uchida. image source
17. Bhabata kusvika hafu yechine yehenya bhata tattoo ink pfungwa yevarume
Kune madzimai kana avo avo vangave vachida chimwe chinhu chakanaka, saga ravo rinogona kuva mashizha masviki. Kana iwe uri kufunga kuva nechekacheche duku, unogona kuenda kune chikamu chehenya. Ichi chinhu chaunogona kuita pazvigunwe zvako, zvigunwe kana rumwe rutivi rwemaoko. image source
18. Mifananidzo yakajeka yekaka tattoo yakajeka kugadzirisa pfungwa yevakadzi
Tsvina dzedhenya dzinogona kuva dzakanaka nemirau kuti dzitadze. Kune zvikamu zvakasiyana zvemuviri apo zvakagadzirwa zvinogona kuita hurukuro huru yemafashoni. Iwe unogona kutora zvishoma kana iwe uchiisiya huru pamusana wako. image source
19. Zvekare shure kushamisa skull tattoo pfungwa yevakomana
Kushandiswa kwemakumbo kwakave kwakakurumbira zvokuti kunyange madzimai ari kushandisa zvinotyisa. Mharidzo dzokuti maphehenya aya anopfurikidza anobva kune munhu akave akavhara chigadzirwa pamuviri. image source
20. Dzvuku rakasimuka nekatehenya tatekete pfungwa yekuita tambo yevanasikana
Zvisinei, dzimwe nguva, hazvirevi zvakanyanya kumushandisi kunze kwekushandisa mafashoni pamuviri. Iwe unogona kuwedzera mamwe mazano ku tattoo yako yekate kuitira kuti iite seyakasiyana uye ipe mharidzo yakasiyana. image source
21. Skull tattoo kugadzira ink pfungwa yepfudzi romurume
Runako rwematato ehenya hahuna humwe hwakanamatirwa kwavari. image source
Chikamu chemuviri chaunoda kushandisa chinofanira kunyatsoongororwa nokuti izvi zvichazoita kuti zviduku kana kuti zvakakura sei zviratidzo zvako zvichave. image source
23. Kunze kwe nzeve yenzeve yekate tsvina pfungwa yevasikana
Iwe unogona kutenderera zvisikwa izvi kuti zvive zviduku kana iwe uchizvikwevera pane zvose zvakare. Iwe unogona kunyatsovandudza chimiro chako nekuwana chinyorwa chikuru chekatepa pamuviri wako. image source
24. Iko kufara, skull tattoo ink pfungwa yevarume
Paunenge uine chimiro chakanaka chekuzora, basa rako hafu rakaitwa uye apo tattoo inotorwa zvakanaka uye iri nani, basa rave rapera. image source
Zvadaro 12 Skull Tattoos For Women
Ankle Tattooskoi fish tattoochifuva tattooshanzvadzi tattoosarm tattoosmaoko tattoosback tattoosdiamond tattoolotus flower tattoorip tattooscherry blossom tattoocute tattooscompass tattoofoot tattoosrudo tattoosshamwari yakanakisisa tattoostribal tattooscouple tattoosshumba tattooscorpion tattooeagle tattoosAnchor tattoosmimhanzi tattoosFeather Tattoocat tattooselephant tattooflower tattooszodiac zviratidzo zviratidzooctopus tattoomehndi designtattoos for girlstattoo yezisocross tattoosrose tattoostattoos kuvanhutattoo ideasbutterfly tattoosneck tattooszuva tattooskorona tattoossleeve tattooshenna tattoomwedzi tattoosangel tattoosinfinity tattoobirds tattoosHeart TattoosGeometric Tattooswatercolor tattooarrow tattoo